के हुन्छ स्तनको स्पर्शले ? – US Nepal News
के हुन्छ स्तनको स्पर्शले ?
स्तन महिलाहरुको यौन उत्तेजनामा योनी जति संवेदनशील हुन्छ । स्तनको टुप्पो पनि त्यस भन्दा कम हुँदैन । हुनत यो यथार्थ जान्ने र भोग्ने हरुले थाहा पाएकै कुरा हो । तर किन यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा भने हालै मात्र वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाएका छन् ।
अमेरिकाको रट्जर्स विश्वविद्यालयका अनुसन्धान कर्ताहरुले गरको अध्ययनले महिलाहरुको स्तनको टुप्पो र योनीमा हुने समान यौन संवेदनशीलताको कारण यी दुइ अंगबाट प्रसार हुने संवेदना मस्तिष्कको एउटै भागले ग्रहण गर्नु हो ।
त्यसैले केही महिलाहरु स्तनको स्पर्श वा सुम्सुम्याइबाटै चरम आनन्द प्राप्त गर्न सक्ने अनुसन्धानकर्ताहरुको भनाइ छ ।
अर्थात् स्तनमा हुने यहीँ संवेदनाको संचार र स्नायु सम्बन्धका कारण स्तनको भरपूर स्पर्शले मात्र पनि महिलाले चरम आनन्द प्राप्त गर्न सक्छिन् र उनलाई योनी र लिंगको मिलन आवश्यक पर्दैन ।
प्रतिकुल मौसमका कारण रक्कि माउंटेन फ्रेन्ड्स अफ नेपालको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम स्थगित
यूस नेपाल न्युज	 April 16, 2016
रुसी लडाकु विमान विद्रोही समूहले सिरियामा खसाल्यो
यूस नेपाल न्युज	 February 4, 2018